Art unchained: Yangon galleries keep creativity flowing - MYANMORE
Home Articles Arts Art unchained: Yangon galleries keep creativity flowing
Art knows no boundary – or lockdown. Although many galleries are closed due to COVID-19, some gallery owners find ways to keep creativity alive and people exposed to art. These vary from YouTube channels and Facebook pages to websites.
စံပျော်ရွှင်ပျော်နတ်အဲ၊ Nat Eh, နတ်သီချင်း – SiWa Project, Aung Soe Min & Jason Moen
စံပျော်ရွှင်ပျော်နတ်အဲ၊ Nat Eh, နတ်သီချင်း – SiWa Project, Aung Soe Min & Jason Moen…………………………………………………………………………………………………………တေးရေး – အောင်စိုးမင်း (Aung Soe Min)တေးဆို – လွတ်လပ်အိမ် (Lut Lat Ein)ဂီတခန့်ခွဲမှု – ဂျေဆင်မိုဝန် (Jason Moen)အက – သံစဥ်သစ္စာ၊ အကနည်းပြ – နှင်းနုဝါသမိုင်းမတိုင်မီ အချိန်ကတည်းက လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ နတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးက ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေခဲ့တာပါ။ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ပုပ္ပါးတောင်ဆိုတာ နတ်တွေပျော်စံရာနယ်မြေလို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ပုပ္ပါးတောင်ကို နတ်တောင်လို့လည်းပြောကြတယ်။ နတ်တွေဆိုတာ ကျေးရွာနေသူတွေနဲ့ တစ်ရပ်တစ်ရွာရောက်နေသူတွေ ပြန်လည်ဆုံဆည်းစရာ အကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက နတ်ပွဲဆိုတာ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြတဲ့ ပွဲတွေပါ။ နတ်ဆိုတာ ယဥ်ကျေးမှုထဲမှာ နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေခဲ့တာပါ။ မြန်မာ့ယဥ်ကျေးမှုမှာ နတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးကတဲ့ နတ်ချင်းပေါင်းများစွာရှိသလို၊ နတ်အကပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ စည်းဝါးဂီတပွဲတော် (SiWa Project) ဟာ မြန်မာ့ကျေးလက်ဂီတမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ဂီတပုံသဏ္ဍန်တွေကို ခေတ်ပြိုင်ဟန်တစ်ခုဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်။ SiWa Project ကို အောင်စိုးမင်း (ပန်းဆိုးတန်း ဂယ်လာရီ) နဲ့ ဂျေဆင်မိုဝန်တို့က ပူးပေါင်းပြီး အားထုတ်ထားကြပါတယ်။ ရူးသွပ်လောက်တဲ့ နတ်အကကို ခေတ်ပြိုင်ဟန်ထဲမှာ စီးမျောနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရင်း စံပျော်ရွှင်ပျော် နတ်အဲက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ ပုပ္ပါးတောင်ဖွဲ့ဖြစ်သလို နတ်ယဥ်ကျေးမှုကို လေးနက်စွာ ခံစားကြည့်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ SiWa Project ရဲ့ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကို ဆက်လက်ပြီး တင်ဆက်ပါဦးမယ်။
由 Pansodan Scene Art Cafe ပန်းဆိုးတန်း ဗွီဒီယိုကဖေး 發佈於 2020年6月1日 星期一
Aung Soe Min, owner and curator of Pansodan Gallery hasaFacebook page called Pansodan Scene Art Cafe where you can watch videos about installation works and art history of Myanmar and enjoy paintings. On their YouTube channel, Pansodan Media, you can observe more comprehensive videos about traditional festivals, towns with interesting historical backgrounds and cultures.
“Altarpiece” by Bart Was Not Here
Besides art exhibitions on their website, you can also visit their gallery from 11am to 6pm on Fridays, Saturdays and Sundays by making an appointment.
G-42, Urban Asia Centre, 48th Street, Middle Block, Botataung, Yangon.
Artist Win Myint Moe is the featured artist for September
Although the gallery in Yaw Min Gyi Street is temporarily closed, the owner has kept his audiences exposed to art through Artist of the Month programme since July. On the Facebook page, an artist is selected each month and their works are uploaded every day throughout the month.
The gallery is open from 10am to 3pm everyday. If the hours are not convenient, you can make an appointment through [email protected] or 01 378 617. Although their 2nd Monsoon Madness Sale is over, Crafty Covid Collector Sale will run through September with discounts. Visit their website for more info.
Chindwin Chambers, 33/35, 37th and 38th Street, Yangon.
5New Treasure Art Gallery
“Hpa An Kyaukk Latt 2” by Kyaw Tint
No gallery? No problem! New Treasure has launched an online art sale where you can check the paintings directly and buy. Check their current collections for sale here. You can enjoy the full collections of the country’s leading and new artists on their website, too.
Previous articleOnline Festivals to keep the traditions alive
Next articleStay at home order in Yangon from September 21st